An Asian Tour Operator: Airport Security (၁၈ နှစ်အောက်မဖတ်ရ)
Airport Security (၁၈ နှစ်အောက်မဖတ်ရ)
သတိ (၁၈ နှစ်အောက်မဖတ်ရ)
နိုင်ငံတကာမှာ အခုတလော ဗုံးပေါက်တဲ့ အကြောင်းတွေ ခဏခဏ ဖတ်ရတယ်။ အထူးသဖြင့် အကြမ်းဖက် သမားတွေ ရဲ့ ဗုံးမျိုးစုံ ကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ သယ်ဆောင်ပြီး ဖောက်တဲ့ အကြောင်းတွေ။ ပြီးတော့ ဗုံးမျိုး စုံ ကိုနည်း မျိုးစုံ နဲ့ဖမ်းမိတဲ့ အကြောင်းတွေ ဖတ်နေရတယ်..။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတကာ ၀င်ပေါက်ထွက် ပေါက်တွေ ဖြစ်တဲ့ လေဆိပ်တွေမှာ လုံခြုံရေး တွေတင်းကြပ်လာတယ်။ ခရီးသည် တိုင်းကို လုံခြုံရေး အရ စစ်ဆေးကြရတယ်။ ဒါပေမယ့် လိုအပ်တာ ထက် ပိုတဲ့ လုံခြုံရေး စနစ်တွေ ကြောင့် ရိုးသားတဲ့ သာမာန် ခရီးသွားတွေ မှာ စိတ်ကသိ ကအောက် ဖြစ်ကြ ရ တာအမှန်ပဲ။ ဒီအကြောင်းတွေ ကို နိုင် ငံတကာ က ကာတွန်း ဂုရုတွေ က တတ်သိပညာ မနေသာ ဆိုသလို သရော်ပြ ထောက် ပြထား တာကို လည်း နိုင် ငံတကာ သတင်း ဂျာနယ်တွေမှာ တွေ့လာရတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ အဝေး နိုင်ငံ တခု ကခရီးသွား လုပ်ငန်း ခွင်မှာ ကျင်လည် နေသူ လုပ်ဖော်ကိုင် ဖက်တဦး ရဲ့ ဖော်ဝပ်လုပ်လိုက် တဲ့ အီးမေးက ကာတွန်းလေး တွေ ကို ဖောက်သည် ချလိုက်တာပါ။
ပုံလေးတွေက ပေါ်လွင် လွန်းလို့ ဘာသာမပြန်တော့ပါဘူး။ (ကျွန်တော်ဘာသာပြန်လိုက် ရင်ရီရတော့ မှာမဟုတ်တော့ ဘူး။ ကိုယ့် အရည်အချင်း ကိုယ်သိတယ် ^_^)
- forwarded mail fromatour operator
- All cartoons are subject to copyright and belong to respective creator.
- Please kindly drop me an email if you are owner or creator of one of those cartoons and not willing to allow for publishing in my blog. I would follow up immediately.
Posted by An Asian Tour Operator at 5/13/2010 03:33:00 PM
Labels: Funny, Tourism
ဟုတ်တယ် တော်တော် ဟာသမြှောက်တယ်။ သရော်တတ်တယ်နော့်။
5:16 PM, May 13, 2010
အသက် ဆယ့်ရှစ်နှစ် လွန်မြောက်တဲ့အတွက်....
ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်လိုက်ပါသည်။ :P
11:03 PM, May 13, 2010
သူများလည်း ၁၈ နှစ်ပြည့် လို့ဖတ်သွားပြီနော်
6:23 PM, May 15, 2010
၁၈ နှစ် မပြည့် သေးပေမဲ့ ဝင်ဖတ်သွားတယ်ဗျာ
12:03 AM, May 23, 2010